Dhagayso Dr Afrax oo ka sheekaynaya sida loo bad-baadin karo Afka Hooyo – Radio Daljir
Dhagayso Dr Afrax oo ka sheekaynaya sida loo bad-baadin karo Afka Hooyo
Oktoobar 12, 2016 8:55 b 0
Boossaaso, Oct, 12, 2016 – Magaalada Boossaaso waxaa lagu qabtay Kulan kusaabsan hiilka Afka Hooyo iyo Horumarinta Aqoonta oo Maanta lagu Qabtay Jaamacada Muqdisho, waxaana kasoo qayb-galay qaybaha bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Boossaaso oo isugu jira madaxda gobolka, aqoonyahanno, haween arday iyo madaxda Akadamiyad goboleedka ee (AGA) oo uu ugu horreeyo Dr Maxamed Daahir Afrax.
D.R Maxamed Daahir Afrax oo ah Gudoomiyaha Akadamiyad goboleedka Afka soomaaliga ee Marka Magaceeda lasoogaabiyo looyaqaan (AGA) oo booqasho Gaaban kuyimid Magaalada Bosaaso ayaa Maanta waxa uu kulan kusaabsan Hiilka Afka hooyo iyo horumarinta Aqoonta uu kuqabtay Hoolka Jaamacada Muqdisho ee Magaalada Bosaaso.
D,r Maxamed Daahir Afrax oo ah Gudoomiyaha Akadamiyad goboleedka Afka soomaaliga ayaa halkaasi kasoo jeediya Qiimaha uuuleeyahay Afka soomaaliga. Hiilka Afka hooyo iyo horumarintiisa , sababaha Afka hooyo hiil iyo Horumarba uu kumutaystay, Marxaladihii uusoomaray Afka Hooyo Aasaasi akadamiyad Goboleedka afka Hooyo. Dadaaladii waxtarka uyeesha Afka soomaaliga iyo sida uu Haatan udhalan Rogmay,
Hadaba Markii ay munaasibadaasi Soodhamaatay ayaa Wariyaheen Xasan Heykal waxa uu Goobta kula kulmay oo uu waraystay D,r Maxamed Daahir Afrax oo ah Gudoomiyaha Akadamiyad goboleedka ee (AGA) Wuxuuna ugu horeen uuwaydiiyay Sida uu kubilawda Dadaalaka loogalay Badbaadinta Afka Hooyo. Waxaana uu kujawaabay
Dhagayso Barnaamijka Xulashada Daljir Oct – 12 – 2016 Wariye Xassan Haykal Radio Daljir Boossaaso
Dhagayso Abaaro ka jira deegaano ka tirsan Sallax ee Gobolka Mudug iyo xoolo dhaqato ku hanti beelay